श्रीलंकालाई ब्याटिङकै चिन्ता ! | Hamro Khelkud
श्रीलंकालाई ब्याटिङकै चिन्ता !
मंगलबार, जेष्ठ २८, २०७६
एजेन्सी – एक दिवसिय विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत मंगलबार श्रीलंका र बंगलादेशबीच प्रतिस्पर्धा हुदैं छ । खेल नेपाली समय अनुसार दिउँसो ३ : १५ बजे ब्रिस्टलमा सुरु हुने छ ।
दुबै टोली दोस्रो जितको खोजिमा छन् । श्रीलंका पहिलो खेलमा न्युजिल्यान्डसँग १० विकेटले पराजित हुँदा दोस्रो खेलमा अफगानिस्तानलाई डक वर्थ लेविसका आधारमा ३४ रनले हराएको थियो । तेस्रो खेलमा भने वर्षाको कारण पाकिस्तानसँग अंक बाडेको थियो ।
यता बंगलादेशले पहिलो खेलमा दक्षिण अफ्रिकालाई २१ रनले स्तब्ध पार्दा दोस्रो खेलमा न्युजिल्यान्डसँग २ विकेटले पराजित हुन पुग्यो । तेस्रो खेलमा इंग्ल्यान्डसँग १ सय ६ रनको फराकिलो हार ब्याहोरेको बंगलादेश चौथो खेलमा दोस्रो जित निकाल्दै शीर्ष चारमा रहदै सेमिफाईनल खेल्ने संभवना बलियो बनाउन चाहान्छ ।
बंगलादेशका अलराउण्डर सकिब अल हसन उत्कृष्ट लयमा छन् । उनले इंग्ल्यान्डसँगको खेलमा १ सय २१ रनको उत्कृष्ट शतकिय इनिङ खेल्दा त्यसअघि दक्षिण अफ्रिकासँग ७५ र न्युजिल्यान्डसँग ६४ रन जोडेका थिए । सकिबलाई रोक्न श्रीलंका खेलाडीलाई मुश्किल पर्नसक्छ ।
सौम्य सरकार,मुश्फिकुर रहिम,महमदुल्लाह,मोसाद्देक हसन साथै तामिम इकवाल बंगलादेशमा ब्याटिङ हतियार हुन् । युवा खेलाडी मेहदी हसन मिराज,मुस्ताफुजिर रहमान,मोहम्मद सैफुद्दीन र कप्तान मोशरफे मोर्तजाले विश्वकपको सुरुवाती तीन खेलमा राम्रो बलिङ प्रर्दशन गरेका छन् ।
यता श्रीलंकालाई ब्याटिङकै चिन्ता छ । न्युजिल्यान्डसँगको खेलमा कप्तान दिमुथ कुरुणारत्ने ५२ रनमा अविजित रहँदा अन्य ८ ब्याट्सम्यानले दोहोरो अंकमा रन छुन सकेका थिएनन् । जुन खेलमा प्रमुख ब्याट्सम्यान कुशल मेन्डिस र एन्जिलो मेन्थिज डक आउटको शिकार बने ।
दोस्रो खेलमा अफगानिस्तानसँग कुशल परेराले ७८ रनको उत्कृष्ट इनिङ खेल्दा उनलाई कुनै पनि ब्याट्सम्यानले राम्रो साथ नदिदा २ सय १ रनमा अल आउट भएको थियो । जसमा मध्यक्रममा प्रमुख ४ ब्याट्सम्यानले ४ रन मात्र जोडेका थिए ।
कुशल मेन्डिस २,एन्जिलो मैथ्युज दोस्रो खेलमा पनि डक आउट भए । जसमा धनन्जय डी शिल्भा डक र तिसेरा परेरा २ रनमा रन आउट भएका थिए । शीर्षक्रममा ब्याट्सम्याननै खराब लयमा रहदा श्रीलंकालाई थप चिन्ताको थपिएको छ ।
एन्जिलो मैथ्युज लगातार डक आउट हुनु,कुशल मेन्डिस लगायत अन्य खेलाडी खराब लय र गैरजिम्मेवार शट खेल्नु श्रीलंकालाई ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ । आजको खेलमा कुशल मेन्डिस,एन्जिलो मैथ्युज,धनन्जय डी शिल्भा,तिसेरा परेराा,इसरु उडना विशेष जिम्मेवारीका साथ खेल्नुपर्ने देखिन्छ ।
अन्यथा बलियो बंगलादेशबीरुद्ध श्रीलंकालाई जित निकाल्न कठिन पर्न सक्छ । पहिलो खेलमा न्युजिल्यान्डसँग निरिह सावित भएका श्रीलंकन कुनै पनि बलरले विकेट लिन सकेका थिएनन् । दोस्रो खेलमा लाथिस मलिङ्गाले ३ र नुवान प्रदीपले ४ विकेट लिदै जित पक्का गरेका थिए ।
आजको खेलमा पनि प्रदीप र मलिङ्गाको प्रर्दशन निकै महत्वूर्ण हुने छ । बंगलादेशले विश्वकपमा हालसम्म श्रीलंकालाई हराउन सकेको छैन । बंगलादेश विश्वकपमा पहिलो पटक श्रीलंकालाई हराउँदै इतिहास रच्न आतुर छ ।
विश्वकपमा यी दुईदेशबीच ३ खेल हुँदैतीनै पटक श्रीलंका विजयी भएको छ । वान डे हेड टु हेडमा यी दुई देशबीच ४५ खेल हुँदा ३६ खेलमा श्रीलंका र ६ खेलमा बंगलादेश विजयी भएका छन् । २ खेलको नतिजा विहिन छ ।